Fahafahana mpilatsaka an-tsitrapo - Banky Sakafo any Galveston County
Ianao ve mitady hamerina ny fiarahamonina?
Manolotena an-tsitrapo anio hanisy fiovana eo amin'ny fiainan'ny mpiara-monina aminao!
Fomba fisoratana anarana ho an'ny mpilatsaka an-tsitrapo amin'ny Internet.
1. Kitiho ny rohy ho an'ny pejinay SignUp.com etsy ambany.
2. Safidio ny daty mahaliana anao.
3. Safidio ny fotoana mety ananan'ny mpilatsaka an-tsitrapo tianao idirana.
4. Kitiho ny bokotra green Sign Up hisoratra anarana. (Raha volondavenona ny bokotra dia efa feno io toerana an-tsitrapo io).
5. Araho ny dingana manaraka mba hamenoana ny fizotran'ny fisoratana anarana.
Tsindrio eto raha hiditra amin'ny pejinay SignUp.com
Ampidino ny Form Form Waiver Waiability Volunteer
Mila fanampiana? Antsoy ny Mpandrindra an-tsitrapo anay raha mila fanazavana fanampiny ao amin'ny (409) 945-4232 na mailaka amin'ny volunteer@galvestoncountyfoodbank.org.
Nanafatra ny asa fanompoana ho an'ny fiarahamonina ny fitsarana
Inona avy ireo fiampangana tsy ekena?
Ny GCFB dia tsy manaiky heloka mifandraika amin'ny zava-mahadomelina, halatra, na herisetra mahery setra.
Misy fameperana taona ve?
Ny fetran'ny taona dia hita taratra amin'ny Fepetran'ny mpilatsaka an-tsitrapo an'ny GCFB (11+)
Inona ny taratasy ilaina?
Ny antontan-taratasy tany am-boalohany avy amin'ny Fitsarana sy / na ny manamboninahitra fanandramana dia tokony omena ny Mpandrindra ny volontaire hanamarinana ny fiampangana sy hanaovana kopia hapetraka ao anaty rakitra ataon'ny mpiasa.
Fenoy azafady ny takelaka etsy ambany.
Fifanarahana momba ny asa fanompoana ho an'ny fiarahamonina 2020 notendren'ny fitsarana
Iza no hifandray amin'ny serivisy eo amin'ny fiaraha-monina?
Mifandraisa amin'ilay Mpandrindra ny Mpirotsaka an-tsitrapo amin'ny alàlan'ny mailaka, volunteer@galvestoncountyfoodbank.org na telefaona 409-945-4232.
Misy fampahalalana hafa ilaina ve?
Ny mpilatsaka an-tsitrapo tendren'ny Fitsarana rehetra dia takiana amin'ny fahatongavan'izy ireo ao amin'ny birao mandritra ny fotoana fohy. Ny orientation dia ny famenoana ny Form of Community Service, ny fanaovana sonia ny Waiveraire GCFB, ny famoronana Sheet Sign-In, ary ny fiofanana momba ny fomba fisoratana anarana ho an'ny fanovana.
Misy fepetra takiana amin'ny akanjo ve?
Tsy misy akanjo malalaka sy maloto
Tsy misy firavaka mihantona (fehin-tànana manintona, rojo lava na kavina)
Tsy misy flip-flop, kapa na kiraro slip-on
Tsy misy kiraro tsy miverina (oh: mules)
Kiraro mihidy ihany
Tsy misy akanjo miharihary na miharihary
Akanjo lava ihany
Tsy misy tampon-tanky, tampon-tady spaghetti, na tampon-tady.
Inona no ilaina amin'ny fandaharam-potoana ahafahan'ny vondrona manao asa an-tsitrapo?
Fenoy ny taratasy fandraisana anjara amin'ny mpilatsaka an-tsitrapo ary atolory ny mpandrindra ny mpilatsaka an-tsitrapo ho fankatoavana.
Fandraisana anjara amin'ny mpilatsaka an-tsitrapo vondrona
Misy endrika hafa ilaina ve?
Ny olona tsirairay miaraka amin'ilay vondrona dia mila mameno ny taratasy fialana an-tsitrapo.
Volavola mpilatsaka an-tsitrapo mpilatsaka an-tsitrapo
Firy ny olona no heverina ho vondrona?
Olona 5 na maromaro miaraka no raisina ho vondrona.
Inona ny haben'ny max azon'ny vondrona avela?
Amin'izao fotoana izao, tsy misy habe betsaka indrindra amin'ny tarika fa hiovaova arak'izay misy malalaka. Raha misy vondrona somary lehibe dia haparitantsika ho vondrona kely kokoa ny vondrona mba hanampy amin'ny faritra ilain'ny olona ilaina (izany hoe pantry sakafo, fanasoketana, Kid Pacz, sns.)
Ireo mpilatsaka an-tsitrapo dia tsy maintsy farafaharatsiny 11 taona no ho miakatra.
Mila olon-dehibe / chaperone 1 isaky ny 10 tsy ampy taona izahay. Ny olon-dehibe / chaperones dia takiana amin'ny fanaraha-maso ny zaza tsy ampy taona amin'ny fotoana rehetra.
Ahoana raha tsy afaka manatrika ny datin'ny mpilatsaka an-tsitrapo ataoko ny vondrona misy ahy?
Azafady mba alefaso mailaka haingana ny mpandrindra ny mpilatsaka an-tsitrapo mba hanafahana ireo toerana ireo, mba hahafahan'ny hafa manao asa an-tsitrapo miaraka aminay.
Fanolo-tena an-tsitrapo ho an'ny tsirairay
Tongasoa ve ireo mpandeha an-tongotra?
Eny, tongasoa ireo mpilatsaka an-tsitrapo mandeha an-tongotra ny talata - alakamisy 9 maraina ka hatramin'ny 3 hariva ary ny zoma 9 maraina ka hatramin'ny 12 hariva.
Fantaro azafady fa mameno haingana ireo toerana mpilatsaka an-tsitrapo ataonay ary tsara kokoa ny fandaharam-potoana amin'ny Internet.
Tsindrio eto raha hisoratra anarana
Ny mpilatsaka an-tsitrapo dia tokony ho 11 taona na mihoatra. Ny ankizy 11 - 14 taona dia tsy maintsy manana olon-dehibe manatrika mandritra ny asa an-tsitrapo. Ny ankizy 15 - 17 taona dia tsy maintsy manana fankatoavan'ny ray aman-dreny/mpiahy amin'ny taratasy famotsorana an-tsitrapo, saingy tsy mila manatrika ny olon-dehibe.
Form Form Waiver Waiability Volunteer
Miarahaba antsika andro mpilatsaka an-tsitrapo ho an'ny vondrona! Azontsika atao ny manomana ny mpiasao, ny vondrona fiangonana, ny kliobanao na ny fikambanananao raha ilaina. Zahao ireo daty misokatra ao amin'ny pejinay SignUp.com ary raha tsy mifanaraka amin'ny fandaharam-potoananao izy ireo dia andefaso mailaka izahay hijerena izay azo apetraka ho an'ny vondrona misy anao.
Tsindrio eto raha hisintona ny endrika fandraisana anjara amin'ny mpilatsaka an-tsitrapo vondrona
Manana fizarana sakafo any amin'ny pantry misy anay any Texas City izahay isaky ny talata, alarobia, alakamisy manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 3 hariva ary ny zoma manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 12 hariva. Matetika isika dia mila mpilatsaka an-tsitrapo 10 farafaharatsiny mba hanampy amin'ny pantry. Mila miova matetika ny mpilatsaka an-tsitrapo ataontsika, koa zahao matetika ny pejy SignUp.com.
Misy toerana an-tsitrapo asabotsy misokatra manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 12pm. Misoratra anarana mialoha. Tianay ny hanana mpilatsaka an-tsitrapo 20 farafaharatsiny amin'ny faran'ny herinandro. Ny 2nd Ny sabotsy isam-bolana dia manomana ireo boaty Homebound, izay mivoaka amin'ireo be antitra sy sembana izay tsy afaka manatona anay amin'ny serivisinay.
Manana filàna isam-bolana izahay ho an'izay maniry hanana fotoana an-tsitrapo mpilatsaka an-tsitrapo handray boaty Homebound ho an'ireo beantitra sy sembana manerana ny faritr'i Galveston. Fotoana iray an-tsitrapo an-tsitrapo an'ity mpilatsaka an-tsitrapo ity ary tsy maintsy fenoin'ny mpilatsaka an-tsitrapo ny fizahana ifotony. Mifandraisa amin'i Kelly Boyer ao amin'ny Kelly@galvestoncountyfoodbank.org Raha mila fanazavana fanampiny.
Manolotra an-tsitrapo an-tsitrapo ao amin'ny Nosy izahay amin'ny Galveston College - Program momba ny sakafo ho an'ny eritreritra. Ireo mpiasa an-tsitrapo ireo dia tsy maintsy mamita ny fizahana ifotony nefa tsy andoavany vola. Mila vitaina 3 andro alohan'ny datin'ny mpilatsaka an-tsitrapo izany. Mifandraisa azafady amin'ny Mpandrindra ny mpilatsaka an-tsitrapo ho an'ny takelaka fanamarinana ambadika, volunteer@galvestoncountyfoodbank.org
Azafady mba zahao ny pejinay SignUp.com aprily ka hatramin'ny jona mba hanampiana amin'ny programa fisakafoanana fahavaratra ho an'ny ankizy Kidz Pacz.
Raha sahy mampatahotra ianao dia manana ny mpilatsaka an-tsitrapo Haunted Warehouse mandritra ny volana Oktobra. Mifandraisa amin'i Julie Morreale ao amin'ny Julie@Galvestoncountyfoodbank.org
Miaraha aminay hitarika ny tolona hamaranana ny hanoanana ao amin'ny County Galveston.